Chelsea Oo Murugadii Haystay Kula Dhacday West Brom, Eden Hazard Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo BLues Oo Dib Ugu Soo Laabtay Kaalinta Afraad Ee Premier League. - Laacib.net
Chelsea Oo Murugadii Haystay Kula Dhacday West Brom, Eden Hazard Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo BLues Oo Dib Ugu Soo Laabtay Kaalinta Afraad Ee Premier League.
Chelsea ayaa Stamfrod Bridge ku garaacday kooxda West Brom waxayna kooxda Antonio Conte ka soo kabsatay natiijooyinkii musiibada ahaa ee ay ku soo jirtay kulamadii la soo dhaafay. Eden Hazard ayaa laba gool kulankan ka dhaliyay isaga oo ahaa xidigii goolasha Blues daahfuray qaybtii hore ee ciyaarta halka Victor Moses uu dhaliyay goolka labaad ee ay Blues kalsoonida wayn ku heshay.
Guushan ayaa Chelsea ka caawisay in ay dib ugu soo laabto kaalinta afraad oo ay Tottenham ku sii jirtay waxayna Blues 27 kulan oo Premier league ah ka heshay 53 dhibcood waxayna hal dhibic ka hoosaysaa Liverpool oo kaalinta saddexaad ku jirta isla markaana 2 dhibcood ka sii hoosaysa Man United oo kaalinta labaad ku jirta.
Chelsea ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo ahayd kooxda uu cadaadiska ugu wayni ku saarnaa in ay guulaysato maadaama oo ay guuldarooyin xidhiidh ahi ka soo gaadheen Bournemouth iyo Watford waxayna Antonio Conte iyo kooxdiisa ciyaartani u ahayd guul ama geeri.
Qaybtii hore ee ciyaarta Chelsea ayay ka muuqatay sida ay u doonaysay in ay guul gaadho oo ay goolal badan dhaliso laakiin kooxda West Brom ayaa muujisay adkaysi badan si ayna xili horeba ciyaarta u guuldaraysan waxayna taasi keentay in kooxda martida ahayd ay wali ciyaarta baaqi ku ahayd in kasta oo hogaanka ciyaarta laga hayay.
DAQIIQADII 4 AAD ee bilawgii ciyaarta ayaa markiiba dhaawac uu soo gaadhay Daniel Sturridge waxaana West Brom qasab ku noqotay in isla daqiiqadihii ciyaarta ugu horeeyay isbadal la sameeyo waxaana kaydka ka soo baxay Jay Rodriguez.
DAQIIQADIHII 4 AAD 6 aad Rondon iyo Jay Rodriguez ayaa fursado fiican u abuuray kooxda martida ahayd ee West Brom iyaga oo sigay in ay Chelsea xili horeba ka naxsadaan laakiin fursadahan ayaan noqon kuwo wax goolal ah keenay.
DAQIIQADII 11 aad West Brom ayaa ugu dhawaatay in ay goolka furitaanka la timaado kadib markii uu Jay Rodriguez fursad wayn ka helay difaaca Chelsea oo banaan siiyay laakiin darbada uu ku dhalin lahaa goolka furitaanka ayuu dhinaca sare mariyay!.
DAQIIQADII 18 AAD Chelsea ayaa markeeda heshay fursad cajiib ah oo gool dhalineed kadib markii uu Zappacosta u muuqday in uu Blues goolka furitaanka siinayo laakiin goolhaye Foster ayaa sameeyay badbaadin wayn si uu ciyaarta gool la’aan ugu sii hayo.
DAQIIQADII 20 AAD Alla Maxay Fursad Lumin Ahayd! Olivier Giroud ayaa helay fursad uu si cadaan ah ugu dhalin karayay goolkiisii ugu horeeyay ee waayihiisa ciyaareed ee Chelsea laakiin si lama filaan ah xidiga ree France ayaa ku fashilmay in uu fursadan ka faa’iideeyo.
DAQIIQADII 25 aad Chelsea ayaa jabisay iska caabitii xooganayd ee West Brom waxayna ahayd waqti tayada Eden Hazard ay Chelsea sare u qaaday kadib markii uu caawin fudud ka helay Olivier Giroud wuxuuna goolkani ahaa mid Blues ka soo yara saaray culayskii waynaa ee ay ka dareemaysay in ayna xili hore goolal dhalin, iyada oo Hazard uu ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Blues ugu danbayn hogaanka ciyaarta ugu qabtay.
Chelsea ayaa dadaalkeeda u laba jibaartay sidii ay kula iman lahayd goolka labaad ee kalsoonida laakiin West Brom ayaa dhinaceeda baadi goob ugu jirtay goolka barbaraha laakiin wax walba ay labada kooxood isku dayo ku sameeyeen waxaa lagu kala nastay 1-0 ay Chelsea hogaanka ciyaarta ugu haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta West Brom ayaa soo laabtay iyada oo si xoogan u raadinaysay goolka barbaraha waxaana fursado fiican helay Rondon iyo Evans oo koorne ay kooxdiisu soo tuuray goolkan ku dhalin gaadhay.
DAQIIQADII 61 AAD Antonio Conte ayaa kaydka uga yeedhay Álvaro Morata oo dhaawac ka soo laabtay wuxuuna badalay Olivier Giroud iyada oo Blues dhinaceeda dagaal ugaga jirtay goolka labaad si ay West Brom iskaga aamusiiso.
DAQIIQADII 67 aad Victor Moses ayaa kooxdiisa Chelsea si buuxda uga dul qaaday walwalkii ka haystay in West Brom ay goolka barbaraha keensato kadib markii uu xidiga ree Nigeria si qurux badan u dhamaystiray goolkan wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-0 ay West Brom xaalad xun ku sii gashay.
DAQIIQADII 71 AAD Chelsea ayaa saddexda dhibcood si rasmi ah iskugu hubsatay waxayna hurdada u dirtay ciyaarta kadib markii uu Eden Hazard dhaliyay goolkiisa labaad ee kulankan iyo waliba goolka saddexaad ee kooxdiisa Chelsea isaga oo inta uu kubbad ka soo qaaty Alvaro Morata si fiican lugta bidix ugu darbeeyay laakiin goolhaye Foster ayaa markale ku fashilmay in uu wax badbaadin ah sameeyo waxayna ciyaartu noqotay 3-0 ay Blues hogaanka ugu raaxaysanayso.
Intaa kadib ciyaarta ayaa noqotay mid si buuxda loogu kala calaf qaaday isla markaana ay West Brom si rasmi ah u quusatay laakiin Chelsea ayaa wali doonaysay in ay hesho goolal badan oo ay ku sii ciil baxdo balse West Brom oo aan shaqo kale hayn ayaa difaacasho aan natiijo lahayn bilawday.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 ay Chelsea ku dubatay West Brom isla markaana ay kaga soo kabsatay waji gabaxyadii ka soo gaadhay Bournemouth iyo Watford ee kulamadii la soo dhaafay.